Maamulka degmada Burtinle oo sheegay inay ka hortagayaan dibad bax kastoo aysan ka warqabin. – Radio Daljir
Janaayo 13, 2013 1:56 b 0
Burtinle, Jan, 13- Gudoomiyaha degmada Burtinle ee gobolka Nugaal oo maanta la soo xiriiray radio daljir ayaa u digay shakhsiyaad uu sheegay inay bannaan baxyo ka dhex abaabulayaan gudaha degmadaasi.
Faarax Maxamuud Jaamac (Salwe) ayaa sheegay inaysan raali ka ahaan doonin in degmada uu masuulka ka yahay lagu dhex qabto bannaan baxyo iyo shirar ka dhan ah dawladda ciddii isku daydana ay tallaabo cad ka qaadi doonaan.
Salwe ayaa sidoo shacabka deegaanka ugu baaqay inay la shaqeeyaan maamulkooda iyo dawladdooda, isla markaana Puntland hada ay leedahay ururro siyaasadeed kuwaasoo loo ogol yahay mucaarad-nimadooda.
Degmada Burtinle ayaa la qabt magaalooyinka waaweyn ee Puntland mamnuucista uu maamulku mamnuucay shirarka iyo isu-soo baxyada dawladda lagaga soo horjeeda ee ay inta badan soo abaabulaan siyaasiyiin iyo shakhsiyaad kale oo dawladda ku kacsan.
Caawa iyo Daljir, Sabti, Jan 12, Cabdirisaaq Cali Cabdi ‘Silver’ ( Daljir Galkacyo)